မလွမ်းတတ်အောင်သင်ပေးပါနဲ့...စံ ဆိုတာ ၂၀၂၁ မှာ ပထမဆုံးဝယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ရဲ့ နာမည်တွေပါ ...။ ဆရာဇဏ်ခီရဲ့ ဒုတိယမြှောက်စာအုပ် "စံ" ဆိုတဲ့ Standard နဲ့ ကျွန်မတစ်ခါမှမသိသေးတဲ့ လူငယ်စာရေးဆရာ ကောင်းမြတ်ပိုင်ပိုင်ရဲ့ မလွမ်းတတ်အောင်သင်ပေးပါဆိုတဲ့ ကဗျာမကျ အက်ဆေးမကျ စာစုတွေနဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေပါတဲ့ စာအုပ်ပါးလေးပါ....။
သင်္ကြန်အကြိုကနေ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ထိ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်မယ်....။ ကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့လိုနေတဲ့အချိန်ပါ ခါတိုင်းလို သင်္ကြန်ကိုအပြင်ထွက်ရေကစားရမယ့်ချိန်မဟုတ်ပါဘူး....။ တိုင်းပြည်ကြီး ကပ်ဆိုးကျရောက်နေချိန် ကျွန်မတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးရမယ်...။ စိတ်နဲ့တောင်မှ အကုသိုလ်မလုပ်မိဖို့ သတိလေးနဲ့ဆင်ခြင်သင့်ပါပြီ....။ မကျေနပ်လို့ဆဲဆိုကျိန်တိုက်မှုတွေလုပ်လေလေ အကုသိုလ်ကြောင့် ကောင်းလာမယ့်အချိန် နှောင့်နှေးလေလေပါပဲ....။ စိတ်ရှည်ရမယ် သီးခံရမယ် ဗြဟ္မစိုရ်တရား လေးပါး လက်ကိုင်ထားနိုင်ရမယ်....။
ကျွန်မတို့ အိမ်မှာနေရင်း တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်နိုင်တာ ကူပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်...။ တစ်ခုချင်းစီချမရေးပြတော့ဘူးနော် ဝိနည်းလွတ်အောင်လို့...။ အိမ်မှာ ကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို နှစ်ကူးကြပါ ....။ စာဖတ်ပါ အစားကောင်းကောင်းစားပါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ အားရှိအောင်နေပါ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာမှ ကျွန်မတို့ လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်လို့ရမှာ....။
မြန်မာ နှစ်ကူးအခါသမယမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ပြီး လတ်တလောကျရောက်နေတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးကိုအမြန်ဆုံး ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်....။
Posted by Cameron at 12:36
နွေဦးမနက်ခင်းမှာ မြူတွေကြားတိုးဝှေ့လင်းဖြာရတဲ့ နေခြည်နုတွေက သိပ်လှတာပဲ.....။ အိန်ဂျယ်ရေ........မင်းဘယ်ရောက်နေလဲ နွေဦးမှာ မြက်ပင်တချို့ခြောက...
ငါတို့အားလုံး “တခုချင်း”စီကနေ ငါတို့အားလုံး “တခုထဲ”ဖြစ်သွားတဲ့အခါ........ "ငါတို့အားလုံးတခုထဲ" ================ ကင်မရာ​တွေ​ရှေ့ ...
သင်္ကြန်ပုံပြင် တခါက သိကြားမင်းနှင့် ဗြဟ္မာမင်းတို့ ( ၂ ) ယောက် စကားလက်ဆုံပြောကြရာ ‘ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက် မတိုင်ခင်က လူ့ပြည်၌ တစ်ပတ်လျှင် ( ...
ရှမ်းနဲ့မြန်မာ သခွားသီးသုပ်တာ ဘာကွာလဲဆိုတော့ ဆီချက်နဲ့ငံပြာရည်ထည့်မထည့်ပဲကွာမှာပါ.....။ ရှမ်းသုပ်ကရိုးရှင်းတယ် ခုလိုရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်နဲ့ အ...
Generation Y တွေရဲ့ ကြွေးကြော်သံ.....
💡မီးမလာလို့ 🕯️ဖယောင်းတိုင်နဲ့စာကျက်ပြီး ၊ မီးလာရင်"ဟေး"လို့ အော်ရတဲ့ခေတ် ၊ 🚽ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားချင်းအတူတူတောင် ၊ တိုင်းမှူး...
နမောဿတ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ ပူဇော်သမျှကိုခံယူတော်မူထိုက်သော အလုံးစုံသော တရားတို့ကို မဖောက်မပြန် ကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူသော မြတ်စွ...
Giveaway for My Beloved Readers.....
Hello!!!! ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်သူတွေ မင်္ဂလာပါ...... :) ကျွန်မရဲ့ဘလော့ကို အခု "မိုးငွေ့နှင့်အတူ"ကနေ "Cameron" ပြန်ပြောင်းလိုက်...
"၀မ်းနည်းပါကြောင်း"#မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါလျက်နိုင်ငံ့အရေးကို စိတ်မ၀င်စား၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေပြီး ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေသူတ...
The Voice Myanmar Season3team ကျားပေါက်က Twan Pee ရဲ့ တစ်သက်စာ .... အရမ်းကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်...။ နားထောင်ကြည့်ကြည့်....။ မိုးငွေ့
မလွမ်းတတ်အောင်သင်ပေးပါနဲ့...စံ ဆိုတာ ၂၀၂၁ မှာ ပထမဆုံးဝယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ရဲ့ နာမည်တွေပါ ...။ ဆရာဇဏ်ခီရဲ့ ဒုတိယမြှောက်စာအုပ် "စံ...
Chicken Veggies Multi-Grain Bowl
simply coral's kitchen (သက္သတ္လြတ္ဟင္း) (13)
ပံုရိပ္မ်ား အခင္းအက်င္း (21)
Warmly Welcome NUG.....
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော် နှင့် အတာအိုး အကြောင်...